Fitenin' ny tompon-tanin' i Aostralia - Wikipedia
Fitenin' ny tompon-tanin' i Aostralia
(tonga teto avy amin'ny Vondrom-pitenin'ny tompontanin'i Aostralia)
Ny fitenin' ny tompon-tanin' i Aostralia dia vondrom-pianakaviam-piteny maro miampy fiteny manirery maro ao Aostralia sy ny nosy manodidina, afa-tsy i Tasmania. Tsy fantatra mazava ny fifandraisan' ireo fiteny ireo.
Tahan'ny mponina miteny amin'ny fiteny aostraliana
Ny ankamaroan' ny fitenin' ny tompon-tanin' i Aostralia dia azo avondrona anatin' ny fianakaviam-piteny pama-niongàna, izay ahitana ny 90 %n' ny velaran-tanin' i Aostralia. Ny sisa hafa dia mitsinjara amin' ny fianakaviam-piteny miisa 27 izay hita any amin' ny faritra farany avaratra.
Ny fianakaviam-piteny pama-niongàna dia mamondrona ny ankamaroan' ny fiteny aostraliana. Isan' ireo, ohatra, ny fiteny diirbala, ny fiteny kamilaroy, ny fiteny kokok-taiora, ny fiteny martotonira, ny fiteny marto oangka, ny fiteny nanta, ny fiteny pintopy, ny fiteny oalmajary, ny fiteny iankonitjajara ary ny ny fiteny idiny.
Vondrom-pitenin'ny tompontanin' i Aostralia;
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fitenin%27_ny_tompon-tanin%27_i_Aostralia&oldid=1038555"
Dernière modification le 7 Oktobra 2021, à 11:10
Voaova farany tamin'ny 7 Oktobra 2021 amin'ny 11:10 ity pejy ity.